Balaarinta Dekedda Bosaaso ma guryo la dumiya mise Baqaaro la dhiso baa Dekadda weyn ee Puntland iyo Itoobiya ka dhexeyn doonta ma Garacad baa ??? | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal Balaarinta Dekedda Bosaaso ma guryo la dumiya mise Baqaaro la dhiso baa...
Balaarinta Dekedda Bosaaso ma guryo la dumiya mise Baqaaro la dhiso baa Dekadda weyn ee Puntland iyo Itoobiya ka dhexeyn doonta ma Garacad baa ???
Himilada Gaas iyo taageerayaashiisa dibadda jooga waxay ku haminayaan in deked weyn iyo Garoon Caalamiya reer Gaalkacyo dhulkooda ka dhistaan si ay uga maarmaan Dekeda yare e marsada doonyaha ku soo xidhaan ee Bosaaso.
Waxaa heshiis riyo beenaad ah lala soo galay mid ka mid ah dalalka Carabta, waana maal qabeeno boqortooyada Sucuudiga ka tirsan in quluubtooda lagu shubo in deked weyn oo Garacad laga dhiso, si dhaqaale balaaran halbowle ugu noqoto Puntland isugu yimadaan Gaalkacyo iyo deegaanka Beesha Gaas ee Garacad.
Dekedda weyn ee Bosaaso oo muddo sanado ah la hadal hayey in la balaarinayo dekedda Boaaso, taasoo la aaminsanaa in wadanka Imaraadka Carabta ay dhisayso deked weyn oo caalamiya oo marakiibta waa weyn konteenarada sida isticmaali karaan. Balse taasi waxay beenoowday markii Nin Falastiini aan shirkad weyn oo qalab fiican haysata la siiyey mashruuca balaarinta Dekadda Bosaaso.
Mid ka mid ah masuuliyiinta Puntland gaar ahaan ka soo jeeda deegaanka Bosaaso ayaa si kulul u cadeeyey in waxa kaliya ee dekadda Bosaaso loo qabanayaa ay tahay mid aan lagu tilmaami Karin balaarin ee lagu sheegi karo guryo la duminayo oo dhismayaal baqaaro waa weyn oo waxa soo dega lagu xafido oo kaliya.
In la riyoodo in la seexda ka horaysa Dekedda weyn ee Sucuudiga Garacad ka dhisayaa waxaa ka horaysa in Dekadda Boosaaso loo qaabeeyo mid caalamiya oo aan la marin habaabin mashruucii koowaad ee kabayaasha dhaqaalaha Dekadaha Puntland, iyadoo tii dhisneyd ee Badda Cask u taalay la dhisin loo qabyaalad raro Garacad iyo Badweynta India.
Reer Barigu waa Dameer Malab sida oo aan dareensaneyn dhagarta iyo shirqoolada khiyaamada ku dhisan ee madaxweyne Gaas iyo kooxdiisa qabyaalada madax martay ku doonayaan inay dekadda Bosaaso ka dhigaan marso yar halka mashruuc weyn oo Itoobiya la is tusay in looga faa’iideysto dekedda weyn Garacad laga dhisayo oo laga dhigo kaabaha kaliya ee Puntland dakhligeeda iyo ganacsatadeeda isticmalaan oo laga guuro tan Bosaaso.
Dekadda Bosaaso waxay ku taal Bad istaratiiji ahaan macno weyn ugu fadhida Geeska Bariga Africa, taasoo ah qooriga biyihiisu degan yihiin ee Badda Cas, halka Dekadaha waa weyn ee ku yaal Badda india waa kuwo lixda bilood ee xagaaga xidhma oo dabeylaha maasuunka ay ku dhuftaan, taasoo fursadaha ganacsi ee ugu weyn loo adeegsado bad xidhanka lixda bilood ee xagaaga ay tahay Dekadda Bosaaso Badda Cas ee ay ku taalo oo ah mid xagaa iyo mad furan dabeylo waa weyn aanay ka dhicin . Haddaba haddii laga dhigo dekad weyn o u qaabeysan mid marakiibta waa weyn ee konteenarada qaada ku soo xidhan karaan waa fursad kaga haboon tan Gaas iyo Itoobiya istuseen maalqabeenada carabtana looga iibiyey in Deked weyn laga dhiso Garacad iyo jid laamiya oo isku xidhi doona Itoobiya iyo Garacad.
Dowladda Itoobiya qorshaheeda waxa weeye in si sahlan dekedo u dhow dhow oo iyadu waxay leedahay oo kale u siticmaasho ka hesho gobolkan mudug, taasoo xataa xoog ciidan doonaysa inay fariisimo uga sameysato dekadda Garacad iyo mudug oo bilaa shuruud ku ilashato dhulka dekadda laga dhisayo ee Garacad , waxay tani halis ku noqon doontaa madaxbanaanida qaranimo ee Soomaaliya iyo in Dowladda Itoobiya gudaha inta ay u soo gasho qeyb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed Ciidamo keento oo fariisimo militeri ka dhisato sida dhulka ay leedahay ay ka taliso oo kale mid u muuqda dabadeedna si fudud ula wareegto dhul weyn oo qeyb soomaaliya ka mid ah oo Gaas u saxiixay.
Waxgaradka Reer Bari ha baraarugaan oo Dekadda Bosaaso eeindhaha laga tuurayo ha ka hor istaageen damaca waalan ee kooxda gaas wax walba xeebta garacad, warshad kalluun iyo qaboojiyayaal la dhisayo mida ugu weyn waxaa laga dhisayaa Garacad halka xeebaha bari kuwo yar yar loo qorsheyey in laga dhiso laba meel oo ka mid ah.marka wxaa muuqda in dhagarta iyo khiyaamada Gaas uu la doonayo Gobolka Bari iyo degmada Bosaaso qaar badan oo reer bari ugu sacaba tumayaan aan rarno ka guurno dekadda Bosaaso iyo guud ahaan gobolka oo laga dhigayo mid dadkiisu is wada haysta “Qeybi oo xukun” Waxaa sugaynaa maalmaha fara ku tiriska ah ee Gaas uga haray mudadii la doortay in uu dhamaysto iyo in kale.
Maxamed Guulwade Bari.
This post has already been read 135324
Previous articleDhagayso: wada xaajoodkii C/samad Maxamed Gallan iyo Madaxweynaha Puntland xagee Maraya Waraysi Dheer Zakariye Cali Xaaji Siciid
Next articleMaalinta caalamiga ah ee shaqaalaha Dunida 01 May oo laga xusay Meelo badan oo caalamka ah